दैनिक एक सय बीस लिटर दुध बेच्छन् राजेश
प्रकासित मिति : २०७५ बैशाख १६, आईतवार प्रकासित समय : १७:३५
बर्दघाट । राजेश कण्डेल ३३ बर्षीय युवा हुन । जसले दुवईमा ५ बर्ष र कुबेतमा ३ बर्ष बैदेशिक रोजगारी गरे । उनले जिवनको ८ बर्ष मुग्लानमै बिताए । तर विदेश नजाने प्रण सहित स्वदेश फर्केका उनी स्वदेश आउदाँ के पेशा गर्ने ? भन्ने अन्यौल साथ आएका थिए । साथीभाई इष्टमित्रको सल्लाहबाट उनको अन्यौल हट्यो ।
सबैको सल्लाहबाट भैसी पाल्ने निर्णय लिए – राजेश भन्छन् – अहिले १६ वटा दुहुना भैसी छ । नवलपरासीको बर्दघाट –४ दाउन्ने मावि पछाडी उनको मिलीजुली भैसी फार्म संचालनमा रहेको छ । जुन फार्म उनले बिदेशबाट आएपछि खरिद गरेका हुन । स्रोह वटा दुहुना भैसीले उनको दिनचर्या पनि फेरिएको छ । उनी भैसीपालक कृषकमा दरिएका छन् । अचेल उनका दाजु र भाई मिलेर दैनिक घाँस काट्ने गोबर सोत्तर गर्नेदेखि गोठमा काम गर्छन । उनले दैनिक १ सय २० लिटर भैसीको दुध बेच्छन् । प्रतिलिटर ७५ ?पैयाका दरले दुध बेच्दाँ उनले दैनिक ९ हजारको दुधको कारोवार गर्छन । उनीकहाँ भैसीको दुध लिन आउनेह?को ताती नै लाग्ने गरेकोछ । राजेशले गोठबाटै स्थानीयलाई दुध खुवाएका छन् । स्थानीय पनि उनी प्रति मख्ख छन् । गोठमा काम गर्दा आनन्द लाग्छ– राजेश सुनाउछन् । तर, राजेशका पनि केही गुनासा छन । ती गुनासो उनी सरोकारवालासंग राख्न् चाहन्छन् । तर कहाँ भन्ने त्यो कुरा कसलाई भन्ने ?उनलाई अन्यौल पनि छ । कण्डेल भन्छन् – प्रोत्साहन पाए धेरै गर्थे जस्तो लाग्छ । तर सरकारबाट पाउछू भनेर चाँहि गरेको होइन । सरकारले विदेशबाट फर्केका युवालाई लक्षित गरेर केही प्रोत्साहन दिन्छ रे भन्ने सुनेको उनले बताए । यद्धपि उनलाई पशु सेवा क्षेत्रका प्राविधिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि र संगै पढेका साथीभाईह?को भने साथ छ । कर्म गर्ने हो फल आफै पाइन्छ – गोठमा काम गरिरहेका राजेश थप्छन् –काम गर्दै जाउ राम्रै होला । बर्दघाट नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष रविन्द्र बिक्रम हमालले वडाका पशुपालक कृषकका फार्म अनुगमन गरेपछि उनको आशा केही बढेकोछ ।
थोरै भएपनि घाँसको बिउ पाए घाँस छरेको छू – करिब १ बिघामा रहेको उन्नत घांस देखाउदै उनले भने– अब त उत्पादन पनि बृद्धि हुन्छ होला । बर्दघाट नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ मा मात्र १५ बटा बढि पशुपालक ब्यवसायिक फार्म छन् । गाई भैसी र बाख्रापालक कृषकका ती फार्मका पशुलाई वडा कार्यालयबाट विभिन्न पनि प्रकारका रोगबाट बचाउने भ्याक्सिन निशुल्क ब्यवस्था गरिएको छ । बर्दघाट नगरपालिकाले सबै वडामा यस्तो प्रबन्ध गरेपछि कृषकह? उत्साहित समेत भएका छन् ।